vokatra tsara amin’ny CEPE, tahan’ny fahazoana ‘covid-19’ midina.... - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsy fanarahan-dalàna, kolikoly sy tsindrin’ny manam-pahefana, vokatra tsara amin’ny CEPE, tahan’ny fahazoana ‘covid-19’ midina, fizarana vatsy tsinjo, fiangonana Ekar misokatra
Vaovao maro momba ny raharaham-pirenena maro lafy no mifamahofaho amin’ny haino aman-jery samihafa, indrindra amin’ny fahitalavitra sy radio tsy miankina, amin’izao mbola maha ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana izao, herinandro faharoa amin’ny 15 andro faha 12 hampiharana azy.
Tsy fanarahan-dalàna. Niteraka adihevitra hatramin’izao ny fandaniana ilay volavolan-dalàna momba ny nampihenana ny isan’ny loholona ao anivon’ny Antenimieran-doholona ho 18 izay 63 raha ny nahalany azy ireo tamin’ny 2015, na dia efa tapaka aza ny daty 11 desambra hanaovana ny fifidianana, araka ny tolo-kevitry ny Ceni. Niresaka lava ny tsy maha ara-dalàna ny nandanihana ilay volavolan-dalàna ny filohan’ny Antenimieran-doholona, Rivo Rakotovao, tamin’iny herinandro iny tao amin’ny haino aman-jery tsy miankina iray ary miely eran’ny tambajotra sosialy. Resaka tsy fanarahan-dalàna ihany, dia mitaky ny mangarahara amin’ny fampiasana ny vola ho an’ny ady amin’ny ‘covid-19’ ny sokajin’olona samihafa, vola avy amin’ny volam-panjakana sy omen’ny mpamatsy vola avy any ivelany, mananika ny 900 tapitrisa dolara.
Kolikoly sy rafitra manaitra amin’ny tsy fanarahan-dalàna. Niaka-tsehatra tamin’ny fandaharana manokana tamina fahitalavitra tsy miankina tamin’ny 10 septambra teo ireo tompon’andraikitra ambony amin’ny rafitra efatra miady amin’ny kolikoly : ny Samifin, ny Bianco, ny Csi ary ny Pac. Nanao fanairana amin’ny mety ho fandaniana volavolan-dalàna nataona depiote izay mamparefo ny fahefan’ny rafitra mifandray amin’ny ady amin’ny kolikoly. Nanambara koa ireo tompon’andraikitra ireo ny mety ho fisian’ny tsindry avy any ambony amin’ny fanatanterahana ny asany.
‘Covid-19’ sy ny tontolon’ny antontanisa. Miaka-midina tao ho ao ny antontanisa ambara amin’ny TVM sy ny RNM ary ireo haino aman-jery tsy miankina momba ny covid-19, araka ny itateran’ny mpitondra teny ofisialy, ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, azy. Tafakatra 1172 ireo am-pitsaboana tamin’ny 16 septambra raha 1010 izany tamin’ny 8 septambra, manodidina ny 91% ny taham-pahasitranana, ary 215 ireo namoy aina. Nanamarika ny Profesora Vololontiana fa mihatsara ny fivoaran’ny tarehimarika raha jerena amin’ny tahan’ny fahazoana ny tsimokaretina, teo amin’ny 6,15% izany tamin’ny 15 septambra raha 9,89% tamin’ny 11 septambra. Na izany aza, dia manantitrantitra hatrany izy fa mbola ao anatin’ny ady isika ka miankina amintsika ny hitohizan’ny fihatsaran’ny vokatra amin’ny fitandremana amin’ny fisorohana ny aretina, amin’ny fanarahana ny fepetra samihafa amin’ny fanaovana maska, fanasana tanana matetika amin’ny rano sy savony na ‘gel désinfectant’, ary fanajana ny elanalana 1 metatra. Maneran-tany dia maherin’ny 29 tapitrisa ireo tranga tamin’ny 15 septambra, mananika ny 20 tapitrisa no sitrana ary maherin’ny 920 000 ireo namoy aina.
Fanadinana CEPE. Namarana ny fanatontosana ny fanadinana CEPE andiany fahatelo ny Faritanin’i Toamasina sy Toliara tamin’ny 15 septambra teo, taorian’ny an’ireo faritany efatra nahatontosa izany tamin’ny 1 septambra sy 8 septambra. Efa saika tapitra nivaly ny an’ireo nahavita ny azy tamin’ny 1 sy 8 septambra ary voalaza fa tsara ny taham-pahafahana amin’ny ankapobeny, misy ny manakaiky 70%.
Fanampiana ny mponina amin’ny sosialim-bahoaka, vatsy tsinjo ary tosika fameno. Filaharana lava no tsikaritra saika isan’andro tamin’ny fokontany maro ao an-drenivohitra, hahazoana izany, toy ny tao amin’ny Epp Ambohimiandra ny alarobia 16 septambra 2020. Fanampiana isaky ny karine ahitana vary roa gony avy any Chine milanja 25 kilao avy, voamaina 2 kilao, rononomandry ambifotsy ‘socolait’ 397g boaty roa, menaka soja anaty tavoahangy mihidy 2 litatra, ary fonosana tambavy CVO+ iray. Maraina talohan’ny tamin’ny 5 ora no efa nilahatra ny olona ary naman’ny nanariva andro vao vita ny fizarana. Tsy mbola karine tahaka ilay modely nasehon’ny filoham-pirenena tamin’ny fahitalavitra misy ‘QR code’ tamin’ny volana aogositra akory no nampiasaina fa ilay efa teo aloha ihany. Tsy ahitan-taratra izay fanatanterahana ny ‘digitalisation’ ny any amin’ny fokontany amin’izao tapaky ny volana septambra izao na dia efa nisy aza ny famaritam-potoana hanaovana izany, nambaran’ny filoham-pirenena.
Vavaka. Nanomboka nisokatra ny EKAR, tamin’ny alahady 13 septambra teo ny ankamaroany ka isan’ny ny diosezin’Antananarivo. Nasiana lamesa maromaro ny alahady ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana, araka ny fandaminana isaky ny paroasy. Fa mitohy ihany koa ny fampitan’ny haino aman-jery tsy miankina fotoam-bavaka toy ny ataon’ny RDB, ny IBC TV sy radio, ary ny radio diosezanina sasany. Mitohy ihany koa ny vavaka ekiomenika karakarain’ny FFKM ampitaina amin’ny TVM sy RNM isaky ny alahady. Niompana tamin’ny famelan-keloka ny lohahevitra tamin’ny alahady teo.